Muxuu ka yiri Modric wararka la xiriirinaya Lionel Messi inuu ka tagayo Barcelona?? – Gool FM
(Madrid) 03 Seb 2020. Ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa faallo ka bixiyay dhibaatada xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi kala dhexeysa kooxdiisa Barcelona.
Luka Modric ayaa carabka ku adkeeyay in bixitaanka kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ay saameyn weyn ku yeelan doonto horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ayaa shaaciyay hadalada Luka Modric kaddib wareysi uu bixiyay, waxaana uu yiri:
“Bixitaanka Messi? waxay noqon doontaa khasaaro culus, sidii dhacday markii uu tagay Cristiano Ronaldo, mana ka fikiro xilli kasta wixii la soo dhaafay, maxaa yeelay tani waa kubadda cagta”.
“Haddii ay tani dhacdo, waxay dhabar jab weyn ku noqon doontaa sharafka Horyaalka Spain”.
“Waa inaan horay eegnaa, waxaa jiri doona ciyaartoy kale ee xiddigo wanaagsan noqon doona, markii uu Ronaldo ka tagay Real Madrid, wax la mid ah ayaa dhacay kooxdana wey sii socotay isaga la’aantiis, waana si la mid ah haddii uu baxo Lionel Messi, haddii ay noqon laheyd Barcelona ama Horyaalka La Liga”.
“Sanadkan waxaan ku guuleystay horyaalkeygii labaad ee La Liga, waxaana doonayaa inaan ku guuleysto koobab badan, mana aqaano haddii aan keeni doono ciyaartoy cusub, laakiin haddii aan sidaan sii ahaano, tayada waa ay jirtaa”.